Tag: pdf to Word | Martech Zone
Tag: pdf ilaa Ereyga
Mararka qaar maahan kuwa weyn, meherad-ganacsiyeed, dhufto ee isku dhafan oo runtii sameeya maalintaada. Maanta waxaan ka helnay qaar ka mid ah hal-xaashi hal-xaashi naqshadeeyeyaasheena oo u muuqday kuwo cajiib ah laakiin 12Mb ahaa markaan u badalay PDF-yada. Markaan runta u hadlo, wax fikrad ah kama haysto waxa ku saabsan riixitaanka PDF sidaa darteed waxaan u tegey oo aan 'Googled' ugu hagaajiyey goobaha iyo casharrada. Waxa aan helay waxay ahayd jawharad - smallpdf. Ha iloobin dejinta, iska iloobi casharrada… kaliya jiido oo hoos u dhig faylkaaga PDF iyo iyada